पर्साकी १८ बर्षिया नितुको श्रीमानले किन गरे धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर हत्या ? खुल्यो रहस्य – Sanghiya Online
पर्साकी १८ बर्षिया नितुको श्रीमानले किन गरे धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर हत्या ? खुल्यो रहस्य
वीरगन्ज,कार्तिक १८ गते सोमबार पर्साको ठोरी गाउँपालिका वडा नं.– ५ मा हिजो विभत्स हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा फेला परेको शवको पहिचान खुलेको छ । हत्या भएकी किशोरी १८ बर्षीय नितु देवी पाशवान रहेको प्रहरीले बताएको छ।
जीराभवानी गाउँपालिका वडा नं.– ३ परसवा निवासि नितु देवी पासवानको आईतबार हत्याको थियो । हत्याको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले मृतक नितुका श्रीमान् रामबाबु पासवान र श्रीमान्का भिनाजुलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुवैजनालाई आज बिहान पासवानकै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिलला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ । घटनाको सुचना पाएलगत्तै पर्सा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्रसिहं राठौरको नेतृत्वमा प्रहरी नायव उपरीक्षक गौतम थापा सहितको टोलीले घटनास्थलमा पुगेर घटनाको मुचुल्का तयार गरी शवलाई पोष्टमार्टमका लागि नारायणी अस्पतालमा पठाएको थियो मृतकको बुवा कपिलदेव पासवानले दिएको बयान अनुसार मृतक नितुको करीब १ बर्ष पहिले विवाह भएको थियो । मृतकको बहिनीको ‘गौना’ रहेकाले श्रीमान् रामबाबु पासवानले हिजो उनलाई माइतीघर ल्याउन लाग्ने क्रममा नितु बाटोबाट नै हराएको भन्दै माइतीपक्षलाई जानकारी गराएका थिए । मोटरसाईकलमा पेट्रोल भर्न जाने क्रममा छोरी बाटोबाट नै बेपत्ता भएको भन्दै रामबाबुले मृतकको बुवा कपिलदेवलाई फोन गरेको मृतकको बुवा कपिलदेवको भनाइ उद्दृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ ।
मृतक नितु देवीका छिमेकीका अनुसार नितुका श्रीमान् रामबाबु पासवानको परस्त्रीसँग अनैतिक सम्बन्ध रहेको नितुले थाहा पाएपछि रामबाबुले श्रीमति नितुको हत्या गरेका हुन् । आइतबार नितुलाई भारतमा रहेको ससुराली घरमा पुरयाइदिने भन्दै पासवानले घरबाट उनलाई मोटरसाइकलमा चढाएर निस्किएका थिए ।
तर बाटोमै उनले नितुलाई ओरिया खोलाको नजिकैको जङ्गलमा लगेर धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर हत्या गरेको उनका छिमेकीले बताएका छन् । घटनास्थलबाट धारिलो चक्कु समेत प्रहरीले फेला पारेको छ । प्रहरी उपरीक्षक राठौरले भने शंकास्पद दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै अनुसन्धान पछि विस्तृत विवरण जानकारी दिइने बताए ।
मधेश आजाद भएनभने मधेशी जनताको अस्तित्व, पहिचान, खतरामा पर्छ- स्वराजी भोपेन्द्र यादव